Haddii aad raadineyso ciyaaryahanka ugu fiican warbaahinta iyo yaabban oo ka mid ah in la doorto; VLC ama MPlayer, qodobkan dhab ahaan awood u yeelan doonaan inay idinka caawiyaan. Waxaa ka mid ah marka la barbardhigo faahfaahsan u dhexeeya labada ciyaaryahan ee warbaahinta caanka ah. Haddaba akhri oo ogaado taas oo ka mid ah ciyaaryahankii ugu xaq naftaada.
Hordhac ah MPlayer iyo VLC
MPlayer waa xor ah, furan-il iyo ciyaaryahanka multimedia aadka loo qaadi karo. Waxa ay ku bilaabatay sidii media player Linux laakiin ka dib kordhiyay taageerada ay siiso Windows. Waa awood ahaanba ciyaaro kasta oo qaabab warbaahinta ee hadda jira ay ka mid yihiin AVI, MKV, RMVB, MP4, MOV iyo iwm Waxa kale oo awood u duuban iyo badbaadinta hoorto videos. Laakiin qayb ugu xumaa waa in ay tahay mid aad u adag in la isticmaalo, gaar ahaan bilowga ah.
VLC waa ciyaaryahan kale oo warbaahinta u awood badan oo la yaab leh. Waxay kuu ogolaanaysaa inaad u ciyaaro ku dhowaad dhammaan noocyada video maqal iyo qaabab. Waxaa si weyn loo isticmaalo sababta oo ah fudaydkii iyo interface fududahay in la isticmaalo qaab sare. Waxa kale oo aad si fudud u samayn kartaa in aad Customization jecel u gaar ah oo ay ku jiraan astaamo sare.
Operating Systems Windows / Linux / Mac OS X / macruufka / Android Windows / Linux / Mac OS X
Inta badan Release Recent Taariikhda Apr 11, 2013 May 5, 2013
Qaabab ay taageerayaan .wav, .mp3, .mp4, .aac, .wma, .ogg, .ra, .avi, .mov, .xvid, .mpeg, .3gp, .asf, .asx, .flv, .m2p iyo iwm .wma, .mp3, .mp4, .ogg, AAC, .mkv, .xvid, divx, .avc, .avi, .flv iyo iwm
Better Player badan MPlayer iyo VLC
Haddii aad raadineyso weeyna dhan-in-hal ciyaaryahan weli si sahlan loo isticmaalo warbaahinta, ee Wondershare Player noqon doonaa doorasho fiican. Waxa ay taageertaa dhow oo dhan oo ka mid ah si weyn loo isticmaalo, iyo qaabab loo jecel yahay sida ay wmv, AVI, MKV, Ogg, OGM, 3GP, Real Media, QuickTime iyo wax ka badan. Sidaa daraadeed, way kuu soo ordi karo video kasta ama file maqal ah muuqan sababtoo ah waa miisaanka yar oo kor u qaadataa xad hoose isticmaalka xasuusta processor. On top of in, barnaamijka gudbiyo isu kharash meel aad u yar ee drive ee adag. Taas macnaheedu waa in aad u kartaa Wondershare Player halka multi-duruufaha aan ka werwerayn oo ku saabsan nidaamka baraf ka baxo ama shilalka. Waxa kale oo ku timaadda interface nadiif ah oo dar-free in aynu kartaa in aad si fudud u qabsato ah video iyo goobaha cod ah sida ay baahidaada.
> Resource > Video > MPlayer vs VLC- oo ka mid ah waa ka wanaagsan?